Masai Mara, Safari က ဦး တည်သည် ခရီးသွားသတင်း
Masai Mara, Safari က ဦး တည်ရာ
Masai Mara အရမ်းကောင်းတယ် Safari က ဦး တည်ရာ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှခရီးသွားများကိုဆွဲဆောင်သည်။ သတ္တဝါကြီးများကိုနှစ်သက်သောသူများအတွက်၊ နေရောင်ခြည်နှင့်ညအချိန်တွင်လှပသောကြယ်ငါးပွင့်နေကောင်းကင်အောက်ရှိအာဖရိကနိုင်ငံများမှတစ်ဆင့် Safari ကိုသွားတာထက်ပိုကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်မှုမရှိဘူး။
Masai Mara သည် ကင်ညာမှာ အလွန်လူကြိုက်များသောဒေသဖြစ်သည့် Serengeti အမျိုးသားဥယျာဉ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အိပ်မက်ထဲကတစ်ခုသည်အာဖရိကကိုသိရန်ဖြစ်သည်ဆိုလျှင်၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဤထူးခြားချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည် သဘာဝအရံ။
ငါတို့ပြောသလိုပဲကင်ညာ၊ Narok ကောင်တီ၊ ဒါကိုမာဆာအနွယ်လို့နာမည်ပေးထားတယ် ကြောင်းတိုင်းပြည်၏ဤအပိုငျးကိုစည်ပင်နှင့် Mara မြစ်နားမှာ။ မူလကကင်ညာကိုလိုနီဖြစ်ဆဲဖြစ်သော ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များတွင်၎င်းအားတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်သန့်ရှင်းရာဌာနအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
နောက်ပိုင်းတွင်ထိုသန့်ရှင်းရာဌာနကို Mara နှင့် Serengeti အကြားရွေ့လျားခဲ့သည့်အခြားဒေသများကိုအကျယ်တဝင့်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း အကြောင်းကို 1.510 စတုရန်းကီလိုမီတာယူထားသောယခင်ကပိုကြီးခဲ့ပေမယ့်။ အဓိကareasရိယာသုံးခုဖြစ်သည့် Sekenani, Musiara နှင့် Mara Triangle ရှိသည်။.
အဆိုပါအရံ၎င်း၏အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ် သစ်ပင်ပန်းမန်များနှင့်သတ္တဝါများ။ သစ်ပင်ပန်းမန်များမှာအကာရှသားများရှိပြီးမန်များသည်အရံတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်ထားသော်လည်းရေရှိရာနှင့်အရံ၏အနောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်။ ဒီမှာအခြေခံအားဖြင့်အာဖရိကရှိပို့စကတ်အားလုံးရှိသင့်တဲ့တိရိစ္ဆာန်များကိုနေထိုင်ကြသည်။ ခြင်္သေ့၊ ကျားသစ်၊ ဆင်၊ ကျွဲ၊ ကြံ့ဖွံ့။ လည်းရှိပါတယ် hyenas, hippos နှင့် cheetahs နှင့်သင်တန်း, သစ်ပင်ကြီး။ သူတို့ထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့ထည့်ပါ သမင်ဒရယ်၊ နှင့်ငှက်မျိုးစိတ်ရာပေါင်းများစွာ။ အရံသို့ခရီးသွား what ည့်သည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း။ ကောင်းပြီ၊ Masai Mara သည်အထူးသဖြင့်ကင်ညာနိုင်ငံနှင့်အာဖရိကတိုက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အလည်အပတ်ခရီးများသည်များသောအားဖြင့် Mara Triangle တွင်တည်ရှိသည် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်အများဆုံးရှိရာနေရာဖြစ်သည်။
ဒီareaရိယာ 1.600 မီတာအမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ် မိုးရာသီရှိတယ် ဒီဇင်ဘာလမှဇန်နဝါရီလနှင့်Aprilပြီနှင့်မေလအကြားမိုးရွာသွန်းမှုအများဆုံးနှင့်အတူနိုဝင်ဘာလမှမေလအထိဖြစ်သည်။ ခြောက်သွေ့ရာသီသည်ဇွန်လမှနိုဝင်ဘာလအထိဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ ၃၀ ° C နှင့်အနည်းဆုံး 30 ° C ခန့်ရှိသည်။
Mara တြိဂံသို့ နှစ်ခုလေယာဉ်ပြေးလမ်းများကဝင်ရောက် နေပါစေရာသီဥတုအမြဲဖွင့်လှစ်။ ၎င်းတို့သည် Mara Serena နှင့် Kichwa Tembo တို့ဖြစ်သည်။ အဓိကဆက်သွယ်ရေးလမ်းသည် Narok နှင့် Sekenani ဂိတ်များကိုဖြတ်ကျော်သည်။ ဒီWithinရိယာထဲမှာနေရာထိုင်ခင်း၏ကမ်းလှမ်းချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။
သင့်တွင်ပိုက်ဆံရှိပါကစျေးကြီးသောနေရာထိုင်ခင်းများရှိသည်။ ဥပမာ Mara Serena သည်သက်တောင့်သက်သာရှိသောကုတင် ၁၅၀ သို့မဟုတ် Little Governor's Camp၊ ဇိမ်ခံကုတင် ၃၆ ခုပါရှိသည်။ ဤနေရာနှစ်ခုသည် Mara တြိဂံအတွင်းရှိတစ်ခုတည်းဖြစ်သည်။ အစွန်အဖျားတွင် Mpata Club၊ Olonana၊ Mara Syria, Kilima Camp နှင့် Kichwa Tembo တို့ပါဝင်သည်။
Safari ကိုသွားဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့ဇူလိုင်နဲ့အောက်တိုဘာလကြားမှာပါ, ရွှေ့ပြောင်း၏ထိုအချိန်က။ နိုဝင်ဘာလနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလအစတွင်ကောင်းမွန်သောသဘာဝမြင်ကွင်းများလည်းရှိသည်။ သို့သော်ထိုလများ၌သင်သွားနိုင်လျှင်ပိုကောင်းသည်။ ထို့နောက်ည၌ကားဖြင့်ခရီးထွက်လေ့ရှိပြီး၊ ဤလူမျိုး၏ယဉ်ကျေးမှု၊ ပူဖောင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ ကြယ်များအောက်တွင်ညစာစားပွဲများပြုလုပ်ရန် Masai ကျေးရွာများသို့သွားရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိသည်။
Masai (သို့) Maasai တွေဟာအာဖရိကရဲ့အထင်ကရအမျိုးအနွယ်တွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ဒီခြေသလုံးမျိုးနွယ်စုဟာအစဉ်အလာကိုထိန်းကျောင်းရေးအတွက်ရည်စူးပြီးသူတို့ရဲ့ရိုးရာအဝတ်အစားအနီရောင်နဲ့ရောင်စုံ shukas၊ အာဖရိကယဉ်ကျေးမှုနှင့်အာဖရိကသတ္တဝါများ၊ Safari ကိုသွားရန်စဉ်းစားသောအခါအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ခြင်း။
Safari အကြောင်းစဉ်းစားပြီး၊ အရံသည်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများကိုပေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ငါတို့ပြောခဲ့သလိုတိုက်ကြီး၏အထိမ်းအမှတ်တိရစ္ဆာန်များရှိသည်။ ထို Big Five များသည်ဇူလိုင်လမှစက်တင်ဘာလအထိ၊ Big Nine သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်၊ သို့သော် Safari သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအလွန်ကောင်းသည်။ အခုပဲ သူတို့သည် ၂၀၂၁ နှင့် ၂၀၂၂ Safaris များအတွက်ကြိုတင်မှာကြားထားပြီးပြီစျေးပေါမှဇိမ်ခံရန်။
ဤ Safaris သည်ကုန်းလမ်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ လေယာဉ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လမ်း Safaris သည်အလွန်လူကြိုက်များပြီးများသောအားဖြင့် နိုင်ရိုဘီတွင်အစနှင့်အဆုံး။ သိသာထင်ရှားတဲ့4×4မော်တော်ယာဉ်များသို့မဟုတ်မီနီဘတ်စ်များတွင်။ ခရီးစဉ် နိုင်ရိုဘီနှင့်မာဆာမာရာအကြား ၅ နာရီမှ ၆ နာရီခန့်ကြာသည်s, သငျသညျအရံအတွင်း၌နေသောသွားကြသည်whichရိယာပေါ်မူတည်။ ။ ဒီလို Safari အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုခြင်းရဲ့အားသာချက်ကလေယာဉ်ထက်စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ကင်ညာနိုင်ငံရဲ့ရှုခင်းကိုလူတစ် ဦး နဲ့အလွန်နီးကပ်စွာတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အားနည်းချက်ကတော့သင်ကုန်းမြေကိုသွားတာပါပဲ။
စျေးနှုန်းများ? စျေးနှုန်းများ ခရီးစဉ်၏ကြာချိန်ပေါ် မူတည်၍ ခြားနားသည်ဒါပေမယ့်လမ်းကြောင်းအားဖြင့် Safari က, စီးပွားရေး version ကို, 400 ကနေ 600 ဒေါ်လာကိုသွား; အလယ်အလတ်ဗားရှင်းဒေါ်လာ ၈၄၅ နှင့်ဇိမ်ခံဗားရှင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အထိ။
လေးရက်ကြာ Safari အတွက်မူဒေါ်လာ ၆၆၅ မှစတင်ပြီးဒေါ်လာ ၁၂၀၀ အထိ (အလယ်အလတ်မူကွဲ)၊ ဇိမ်ခံခရီးစဉ်အထိဒေါ်လာ ၂၆၀၀ အထိတက်နိုင်သည်။ ငါးရက်ကြာ Safari သည်ဒေါ်လာ ၈၀၀ မှဒေါ်လာ ၁၆၀၀ အကြားရှိပြီးခုနစ်ရက်ကြာ Safari အထိဖြစ်သည်။ Safari ၏ရက်သတ္တပတ်သည်ငါးရက်နှင့်ခြောက်ရက်ခရီးများနှင့်တူညီသောစျေးနှုန်းများတူညီမှုမရှိသောကြောင့်တစ်ပတ်လုံးအဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်။
လေးစားမှုနှင့်အတူယခု လေယာဉ်ပျံ Safaris သို့မဟုတ်ပျံ Safaris များဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်အလွန်အဆင်ပြေပါသည် လေယာဉ်ဖြင့်သင်သည်တစ်နာရီအတွင်းနိုင်ရိုဘီသို့ Masai Mara နှင့်ဆက်သွယ်သည်။ တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်ပျံသန်းမှုများရှိပြီးမနက်ခင်းမှထွက်ခွာလျှင်နေ့လည်စာစားချိန်တွင်စခန်းသို့ရောက်ရှိသည်။ စျေးနှုန်းများ? ၂ ရက်ကြာလေယာဉ်ပျံ Safari သည်ဒေါ်လာ ၈၀၀ မှ ၉၅၀ ကြား၊ သုံးရက်ကြာ Safari $ 800 မှ $ 950 နှင့်လေးရက်ကြာ Safari $ 990 မှ $ 1400 အကြားကုန်ကျသည်။
သင် Safari တစ်မျိုးသို့မဟုတ်အခြားအမျိုးအစားတစ်ခုကိုရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ မြေပေါ်တွင်အသုံးပြုသောမော်တော်ယာဉ်များမှာအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်အာဖရိကမြေများကိုဆင်ခြင်ရန်တံခါးဖွင့်နိုင်သည်။ ပန်းခြံရှိသူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ရေဒီယိုများလည်းရှိသည်။ နေရာထိုင်ခင်းကမ်းလှမ်းမှုသည်မတူပါအားလုံးသည်ဘတ်ဂျက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင့်တွင်ကြယ်ငါးပွင့်နှင့်အခြားရိုးရှင်းသောစခန်းများရှိပြီးကိုယ်ပိုင်ငှားရမ်းထားသောအိမ်များရှိသည်။
အခြေခံအားဖြင့်တော့ Masai Mara Reserve ရှိ Safari တွင် Jeep စီးနင်းခြင်း၊ ပူဖောင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်များ၊ Masai ကျေးရွာများသို့သွားရောက်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ မြင်းစီးခြင်းနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများပါဝင်သည်။စခန်းချနေရာများရှိကြယ်အောက်မှာ s ။ ၎င်းသည်အာဖရိကန်တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ရှုခင်းများကိုပထမ ဦး ဆုံးသိရှိပြီးဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအချက်အလက်များ အရံရိုက်ထည့်ရန်ကြေးပေးဆောင်သည် သင်ရွေးချယ်သောနေရာထိုင်ခင်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်မူတည်သည်။ သင်အတွင်း၌နေမည်ဆိုလျှင်ဝင်ပေါက်သည်အရွယ်ရောက်သူတစ်ယောက်အတွက်ဒေါ်လာ ၇၀ ဖြစ်ပြီး ၂၄ နာရီနှင့် ၁၂ နှစ်အောက်ကလေးများအတွက် ၄၃၀ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ အခြားတစ်ဖက်သို့သွားလျှင်သင်အဓိကအရံအပြင်ဘက်တွင်နေလျှင်ဝင်ပေါက်သည်ဒေါ်လာ ၈၀ နှင့် ၂၄ နာရီအတွက်ကုန်ကျမည်။
ဤနှုန်းသည်အရံ၏အနောက်ဘက်စင်္ကြံရှိ Narok ဘက်နှင့် Mara ထိန်းသိမ်းရေးတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကံကောင်းတာကဒီကုန်ကျစရိတ် safaris ၏နောက်ဆုံးစျေးတွင်ပါဝင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာဖရိကတိုက် » ကင်ညာ » Masai Mara, Safari က ဦး တည်ရာ